Ciidamo Talyaani ah oo Muqdisho u jooga howl ka duwan tan AMISOM - iftineducation.com
iftineducation.com – Ciidamo ka socda Dowladda Talyaaniga oo wata gawaarida gaashaaman ayaa markii ugu horeysay lagu arkay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo bilaabay inay qabtaan howlo ka duwan tan ciidamada AMISOM ay u joogaan dalka Soomaaliya.
Warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay ilo wareedyo ku sugan gudaha garooItalian-army-2-500x294nka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada Talyaaniga ka socda tiradooda ka badan tahay 100-askari, kuwaasi oo wata gaadiidka gaashaaman iyo gawaarida aanay rasaastu karin.
Ciidamada Dowladda Talyaaniga ka socda ayaa isticmaala marka ay wadada marayaan gawaarida ay caanka ku yihiin oo ay ku xiran yihiin calanka wadankaasi Talyaaniga, iyagoona sidoo kale wata dareyska ciidamada dalkaas.
Weriye ka tirsan shabakadaan oo indhihiisa ku arkay kolonyo ka tirsan ciidamada Talyaaniga oo gelaya xerada ay ku leeyihiin gudaha garoonka diyaaradaha ayaa u kuur galay howlaha ay dalka ka qabtaan ciidamadaasi, wuxuuna xaqiijiyay inay u joogaan tababarada ciidamada Dowladda Federaalka.
Tababarada ay bixiyaan ciidamada Talyaaniga ayaa yimid kaddib heshiis dhex maray labada dowladood oo dhowaan safiir ka socda Dowladda Talyaaniga kulan gaar ah la qaatay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo tallaabadani ay ka mid tahay hirgelinta heshiiska labada dhinac dhex maray.
Daawo: Booliska Magaladda Columbus ee Mareykanka oo si xun ula dhaqmey haween Soomaaliyeed.